DataNumen DWG Recovery - Isbarbardhiga tartanka
Bogga ugu weyn Products DataNumen DWG Recovery Isbarbardhiga tartanka
DataNumen DWG Recovery Isbarbar
DataNumen DWG Recovery Isbarbardhiga tartanka
AutoCAD 2014 Soo Celinta Taliska
Qalabka Dib u Celinta ee loogu talagalay DWG v2.0.5.0
Heerka Soo-kabashada iyo Waqtiga
Celceliska Heerka Soo-kabashada *
Celceliska Wakhtiga Soo Kabashada **
3 daqiiqo 28 ilbiriqsi 8 millisekond
1 daqiiqo 22 ilbidhiqsi
32 daqiiqo 10 ilbidhiqsi
Kiiska 1aad (DULQAAD, ENDBLK)
Keeska 2 (POINT, LINE)
Kiiska 3 (ARC, CIRCLE)
(SEQEND, INSERT, HOGAAMIYE, dulqaad)
(BLOCK CONTROL OBJ, BLOCK HEADER, LAYER CONTROL OBJ, LAYER, STYLE CONTROL OBJ, STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, VIEW CONTROL OBJ, ARAG, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APP, Xakamaynta DIMSTYLE OBJ, DIMSTYLE)
Orod adigoon rakibin AutoCAD
Input DWG faylka faylka
Taageerada DWG 2004-2006, DWG 2010-2012, DWG 2013-2014
Taageerada DWG 2010-2012, DWG 2013-2014
Taageerada DWG 2010-2012.
ma taageero DWG faylka 2013-2014
Faylka wax soo saar ee DWG iyo qaabka DXF
Taageerada DWG iyo DXF ee R2.5, R2.6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000-2014
Taageerada DWG iyo DXF ee R12, R14,2000-2014
Taageero si loo helo oo loo xusho DWG faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka maxalliga ah, sida ku cad shuruudaha baaritaanka qaarkood.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waad dayactiri kartaa DWG ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
+ Alaab qiimo kala duwan noocyada shatiyada kala duwan leh, waxaan u isticmaali doonnaa celceliska qiimaha.
* Celceliska Heerka Soo-kabashada waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirakoobka 1000 si aan kala sooc lahayn loo xushay musuqmaasuq DWG files.
** Celceliska Wakhtiga Soo-kabashada waxaa loo xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirakoobka 1000 si aan kala sooc lahayn loo xushay musuqmaasuq DWG files.